यात्रु चढाउँदै म्याजिकमा पछाडिबाट ठक्करदिदा घटनास्थलमै तीनको मृत्यु: दर्जनै घाइते
२०७६ भदौ ७ शनिबार Saturday, August 24
कृर्षि वातावरण राष्ट्रिय प्रदेश विशेष अपराध अर्थ-व्यापार विचार-विश्लेषण
नेपाली मुस्लिम हरूको लागी हज सम्बंधमा सूचना: नेपलीज मुस्लिम सोसाइटी, युएई
विंगर र टेम्पो एक आपसमा ठोक्किदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यू: २ जना घाईते
सिरहामा खुलेआम राति भरुवा बन्दुकलिएर घुमफिर गर्ने प्रहरीको फन्दामा
धनुषामा करेन्ट लागेर बुवा छोराको मृत्यु: आमा गम्भीर घाइते
रिफ्यूलिंग स्टेशनको शुभारम्भ : भाडादर कम हुने विश्वास
समाजवादी पार्टीका नेता नविन यादबले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन गठन गर्ने तयारीमा
पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प: स्थानीयवासीहरु आन्दोलनमा
घरमै सुत रहेकी नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कार: आरोपी पक्राउ
बस दुर्घटनामा: घटनास्थलमै ३ मृत्यु १७ घाईते
माटो हालिएको सडकमा ढलान: २५ लाख रुपैयाको बजेट
२०७६ असार १७ मंगलबार
आयुब हुसेन/लहान, सिरहाको लहान नगरपालिका पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सोमबार यात्रु चढाउँदै गरेको एउटा म्याजिकमा पछाडिबाट आएको मालबाहक ट्रकले ठक्करदिदा घटनास्थलमै तीन जनाको मृत्यु एक दर्जन घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा घाईते भएका १२ जना मध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । पूर्वबाट पश्चिम तर्फ आउँदै गरेको ना. १ ज. ७४५४ नम्बरको म्याजिकले सडक छेउमा रोकेर यात्रु चढाइरहँदा सोही दिशाबाट आउँदै गरेको ना.८ ख. २४१५ नम्बरको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको सिरहा प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुने तीनै जना म्याजिका यात्री थिए । म्याजिकमा सबार सिरहाको पुरानो चोहर्वा निवासी ४० वर्षीय गणपति महरा, बरियारपट्टी गाउँपालिकाका ७० वर्षीया बचियादेवी राम रहेका छन् । एक जनाको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाए ।
घाइतेहरुको लहानस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।सनाखत भएका मृतकहरुको शव परिवारजनलाई बुझाइएको प्रहरीले बताए । दुर्घटनापछि दुबै सबारीका चालक फरार भएका छन । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रक र म्याजिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।